Afjarno qalab Android aad ama biligleynaya ROM caado kaa caawinaysaa in aad helaan ugu sareeya ee sharaf ama waayo-aragnimo muuqaalada kala duwan, kuwaas oo ah faa'iidooyinka ugu cajiibsan ee Android isticmaala. Laakiin wax xun mar walba dhici, qalab Android aad u dhaqmaan lahaa aan caadi ahayn ka dib markii rujin ama bexeen ROM cusub. Sidaas waxa aannu ku samayn karaa si loo badbaadiyo telefoonada naga bricked jilicsan qaba? Ha argagax, waxaan heysanaa gurmadka aad u. Fiiro gaar ah: Ka hor inta aan go'aan ku gaadhid inaad ka rujin qalab Android aad, aad u baahan tahay si ay u bartaan labada faa'iidooyinka iyo halista ah ee Android soo afjarno.
Inta aynaan gelin doodda xal ee faahfaahin ah, waxaan u baahan nahay in la sameeyo erayga "bricked" toosan. Phone A bricked ka dhigan tahay in aad telefoonka uga noqonaynin, ee si kasta, oo waxba ma jiraan samayn karaa inaan ku saxno. Oo markii dadku ugu dhihi "bricked", taas macnaheedu ma aha qalab ay noqon leben dhab ah, waa nooc ka mid ah oo jilicsan ayaa bricked oo la hagaajin karin. Your Android stucks phone on loop kabaha macnaheedu ma aha waxa la bricked, midna waa kabaha taleefanka si toos ah soo kabashada ama bootloader. Xaaladahan waa in lagu xalin karo. Fiiro gaar ah: Baro Qaamuus yaraha erayada rooting sida xididka, ROM, soo kabashada, bootloader si looga fogaado dhibaatooyinka qaar ka mid ah.
Stucking ugu laab Boot ah: Masax Data & Cache
Haddii telefoonka aad Android ku xayiran garoonka loop kabaha oo aan kabaha karaa screen guriga ka dib markii bexeen ROM cusub, waa laga yaabaa in aad illowdo in aad tirtiro xogta iyo khasnado oo keeni karo qalad sida. Isku day telefoonka aad u hesho screen guriga, laakiin dhab ahaan xogta hadhay ama khasnado ku joogsaday, sidaa daraadeed waxa uu reboot doonaa kaani oo kale mar. Sidaas tirtira xogta iyo khasnado in hab dib u soo kabashada badan tahay xallin karo dhibaatada. Si aad u tirtiri xogta iyo khasnado:
Xir telefoonka aad Android oo boot galay hab-kabashada. Sida caadiga ah waxaad riixi kartaa mugga Down iyo Power loo sameeyo, laakiin waa kala duwan ee telefoonka kasta, isku day in aad Google sida loo sameeyo la telefoonka gaarka ah.
Haddii aad isticmaalayso ClockworkMod Recovery, falgali menu la button mugga oo ay doortaan oo la batoonka. Hoos si Advanced, iyo dooran "Ha ogolaan in Dalvik Cache", ka dibna dib ugu shaashadda weyn iyo dooran "masax ah Barzakh, Cache" ka dib. Ugu dambayn, madaxa si "Ha ogolaan in Data Warbixannada / Factory". Fadlan la soco in kasta oo Chine iyo goobaha aad la tirtiro lahaa.
Reboot telefoonka aad Android.
Booting toosan galay Recovery Mode: Flash ROM a New
Guud ahaan, haddii aad kabaha qalab Android si toos ah hab-kabashada, isku day in aad ugu fiican yahay in iftiimiyo ROM cusub. Iyadoo fadlan ogow ROMS qaar ka mid ah kabaha lahaa si toos ah hab kabashada kadib markii ay bexeen, sidaa darteed isku day in aad reboot telefoonka hal mar ka soo kabashada hab. Haddii ay waxba tarin, reflash ROM ah. here Hubi in ay bartaan sida loo iftiimiyo ROM ah.
Booting toosan galay Bootloader: Back to Stock
Haddii aad qabto dhibaatadan oo aan la hagaajin karin iyadoo flash ROM cusub, xalka ugu kalsoonaan karo waxay dib u stock. Download ROM saamiyada ka soo saaraha iyo waxa iftiimiyo si ay u qalab aad. Ma kartaa qoto dheer u tagaan maxaa yeelay in badan oo ah kuwa farsameeya leeyihiin qalab Laydh iftiimaya iyaga u gaar ah, hadda Google waa saaxiibkaa, baadhaan, oo ay bartaan sida loo iftiimiyo ROM stock u qalab gaar ah oo aad ka. Fiiro gaar ah: Shidista ROM saamiyada unroot doonaa qalab aad iyo cuudka oo dhammu Chine iyo goobaha, xogta aad gurmad hor samayn.
Haddii aad dhibaato weli aan lagu xallin karin ka dib wax walba oo isku dayay kor ku xusan, waxaa ay u badan tahay kaarka SD aad helay kharribeen. Qaado kaadhka SD aad oo ku rid aad akhristaha card SD, ka dibna waxa ay qaab on your computer. Haddii aad qalabka Android dhab bricked, ma jirto wax aad sameyn karto si ay u soo celin, fadlan u jiheysan dukaanka oo aad weydiisan kartaa qaar ka mid ah caawimaad dhinaca farsamada ah.